किन हुन्छ पत्थरी? पत्थरी हुन नदिन के गर्ने ? शल्यक्रियाविना पनि निको हुन्छ पत्थरी ? – Gaule Media ::
Home/अन्य/किन हुन्छ पत्थरी? पत्थरी हुन नदिन के गर्ने ? शल्यक्रियाविना पनि निको हुन्छ पत्थरी ?